सागमा आज १५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सागमा आज १५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै
सागमा आज १५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै
काठमाडौं- नेपालमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को आठौं दिन आज (आइतबार) विभिन्न १५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
यी खेल काठमाडौं पोखरा र जनकपुरमा सञ्चालन हुनेछन् । आज आर्चरी, बास्केटबल, बक्सिङ, क्रिकेट, फेन्सीङ, फुटबल, ह्यान्डबल, जुडो, पौडी, सुटिङ,स्क्वास, टेनिस, बीच भलिबल, भारोत्तोलन र कुस्तीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
जसमा महिला क्रिकेट, भारोत्तोलन, बीच भलिबल, आर्चरी र ह्यान्डबल पोखरामा हुन्छ । कुस्ती जनकपुर र अन्य खेल काठमाडौंमा हुनेछ ।
आजका खेल कुन कुन
फुटबल : पुरुष फुटबलतर्फ आज नेपालले बंगलादेशको सामना गर्दैछ । नेपाल र बंगलादेशबीचको विजेताले फाइनल पुग्ने अर्को टिमको टुंगो लाग्नेछ ।
भुटान यस अघि नै फाइनल पुगिसकेको छ । त्यसैले आज नेपाललाई फाइनल पुग्न कम्तिमा बराबरीको आवश्यकता हुनेछ । यदि पराजित भएको खण्डमा भने नेपालले कास्य पदकको लागि खेल्नेछ ।
क्रिकेट : क्रिकेट अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा आइतबार स्वर्ण पदकको लागि टेष्ट राष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेश भिड्दै छन् । नेपालले भने माल्दिभ्सलाई सहजै पराजित गर्दै कास्य पदक जितेको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने पुरुष क्रिकेटमा टेष्ट राष्ट्र श्रीलंका यू-२३ र बंगलादेश यू-२३ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । लिग चरणको अन्तिम खेल बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।
एक खेल अगाबै श्रीलंका र बंगलादेश फाइनल पुगिसकेका छन् । घरेलु टोली नेपाल भने दुवै टेष्ट राष्ट्रसंग पराजित भएको थियो ।
सुटिङ : सागको आठौं दिन सुटिङतर्फ एक मात्रै खेल छ । सातदोबाटोस्थित सुटिङ हलमा एयर पेस्तोल खेल हुनेछ । दुई चरणमा खेलाईने खेलको फाइनल आइतबार नै हुनेछ ।
स्क्वास : स्क्वासतर्फ आज महिला पुरुष तथा टिम इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सातदाबोटोस्थित स्क्वास हलमा हुने खेलमा नेपालले टिम इभेन्ट तर्फमात्रै खेल्नेछ । अन्य विधामा भने नेपाल यस अघिनै बाहिरिसकेको छ । फाइनल खेलमा भारत र पाकिस्तान भिड्नेछन् ।
जुडो : साग अन्तर्गत जुडोको खेल आजबाट शुरु हुँदैछ । आठौं दिनमा आएर शुरु भएको पहिलो दिन ७ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । जसमा नेपालका ४ महिला तथा पुरुषतर्फ ३ खेलाडीले भाग लिनेछन् । खेल त्रिभुवन आर्मी क्लबको शारिरीक तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ ।
बक्सिङ : बक्सिङमा आइतबार विभिन्न १४ तौल समूहको सेमिफाइनल खेल हुनेछ । जसमा नेपालले ६ तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
भारोत्तोलन : भारोत्तोलनमा आइतबार पनि विभिन्न स्पर्धा हुनेछ । पोखरामा हुने खेलमा पुरुषको ३ र महिलाको २ स्पर्धा हुनेछ । पुरुष तर्फ १०२ केजी, १०९ केजी र १०९ केजी माथि तौल समुहको खेल हुनेछ । यस्तै महिलामा ८७ केजी र ८७ केजी माथिको तौल समुहका खेल हुनेछ ।
ह्याण्डबल : ह्याण्डबलमा आइतबार अन्तिम दिन स्वर्ण र कास्य पदकको लागि खेल हुनेछ । महिलातर्फको स्वर्णका लागि नेपाल र भारत खेल्ने छन् । पुरुषतर्फ भारतले पाकिस्तानको सामना गर्ने छ ।
महिलातर्फ कास्यको लागि बंगलादेश र पाकिस्तान भिड्ने छन् । पुरुषतर्फ बंगलादेश र श्रीलंका खेल्नेछन् ।
बास्केटबल : बास्केटबलमा आइतबार पनि लिग चरणको विभिन्न खेल हुनेछ ।आज नेपालले पुरुषमा माल्दिभ्ससँग खेल्ने छन् । महिलामा नेपालले भुटानसँग खेल्नेछ ।
यस्तै थ्री बाई थ्री बास्केटबलको महिलामा नेपालले श्रीलंका र भारतसँग खेल्नेछ । पुरुषमा नेपालले भारतसँग खेल्नेछ ।
पौडी : पौडीमा आज पनि विभिन्न इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ
आर्चरी : आर्चरीमा आज विभिन्न खेलहरु हुने छ । आइतबार विभिन्न विधामा फाइनल खेल हुनेछ ।
फेन्सिङ : फेन्सिङमा आजदेखि टिम इभेन्टका प्रतिस्पर्धा शुरु हुनेछ । फेन्सिङमा अहिलेसम्म भारतले पाँच र बंगलादेशले एक स्वर्ण जितेको छ ।
टेनिस : टेनिसमा आइतबार विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सातदोबाटोस्थित लनटेनिस कोर्टमा आज विभिन्न स्पर्धाको फाइनल खेल हुनेछ।
कुस्ती : कुस्तीको खेल जनकपुरमा आज पनि हुनेछ । कुस्तीमा नेपालले एक स्वर्ण जितिसकेको छ ।
बीच भलिबल : बीच भलिबलमा आज सेमिफाइनल र फाइनलका खेलहरु हुनेछन् । महिला र पुरुषमा दुवै तर्फ उपाधिका लागि खेल्ने छन् ।
धरानमा सि’रहाका सं’क्रमितको मृ’त्यु !
५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जीवनभर कहिले मिल्न नसकेको सफलता, कतै तपाइँ को राशी त परेंन ? हर्नुहोस
आइतबार प्रधानमन्त्री ओली जन्मदिन मनाउन हेलिकोप्टरमार्फत् जन्मथलो जाँदै
चर्चित फुटबल खेलाडी रोनाल्डोलाई कोरोना संक्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा चिकित्सककै निगरानीमा राखिने, नियमित डायलासिस पनि गरिने